PVD-coated တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယမ် Sputtering ပစ်မှတ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်း
တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ်မှတ်များကိုပုံသွင်းသောနည်းလမ်းသည် porosity နှင့် shrinkage ကိုရှောင်လွှဲနိုင်မည်မဟုတ်ပေ. အရွယ်အစားကြီးမားသောတိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယံသံမဏိပိုက်များနှင့်မီးချောင်းများသည်အလှည့်ကျပြွန်ပစ်မှတ်ကိုပြုလုပ်သည့်အခါတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ရေလုံခြင်းအာနိသင်ကိုအာမမခံနိုင်ပါ, ပြွန်တံတိုင်းကိုသွန်းလုပ်သကဲ့သို့၎င်း၊, နံရံအထူသည်ပါးလွှာသည်, ချထားသောအပေါက်တစ်ခုရှိနေသရွေ့ချောင်ပြီးကျုံ့သွားနိုင်သည်, တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်, ပေါ့ပါးသူများပေါက်ကြားလိမ့်မည်, ပစ်မှတ်ပြွန်သည်စတင်ထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်, သို့မဟုတ်မသန့်ရှင်းသောပမာဏများစွာသည်တုံ့ပြန်မှုတွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ကိုအရောင်ကျစေသည် (သို့) အရောင်မှားသည်။ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်, ကျုံ့သောအပေါက်မှရေကိုလေဟာနယ်ခန်းထဲသို့တိုက်ရိုက်ထိုးသည်, အစစ်အမှန်အပေါက်နှင့်လေဟာနယ်ယူနစ်ကိုညစ်ညမ်းစေလိမ့်မည်.
အမှုန့်သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်လုပ်မှုတိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယံပစ်မှတ်porosity နှင့် shrinkage ပြဿနာမရှိပါ, ဒါပေမယ့်အမှုန့်သတ္တုဗေဒကိုအဏုကြည့်မှန်ကနေကြည့်တယ်, ၎င်းသည် porous material တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်မင်းလုပ်ချင်ရင်လုပ်တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယံလှည့်ပြွန်ပစ်မှတ်, ပစ္စည်းကျစ်လစ်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များသည်အလွန်တင်းကျပ်သည်, သိပ်သည်းဆထက်ကြီးရမည် 98%, တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယမ်သတ္တု၏အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုမြင့်မားပြီး microstructure သည်မသင့်တော်ပါ။, တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယမ်ချောင်း၏အတွင်းပိုင်းဖိအားသည်ကြီးမားသည်, ပြိုလဲရန်လွယ်ကူသည်, ၎င်းကိုအလှည့်ကျပြွန်ပစ်မှတ်အဖြစ် သုံး၍ မရပါ. ထို့ကြောင့်, ဤအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ပင်အမှုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အမှုန်အရွယ်အစားအချိုးအတွက်လိုအပ်ချက်များစွာရှိသည်, အမှုန့်သတ္တုတူးဖော်ရေးတိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယံလက်စွပ်ကိုသံမဏိသံမဏိပြွန်သို့မဟုတ်တိုက်တေနီယမ်ပြွန်နှင့်တွဲရန်လိုသည်. တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယမ်၏ကြီးမားသောအပူချဲ့အားကြောင့်, sputtering..5 ～ 1m အတွင်းဒေသခံပစ်မှတ်တိုးချဲ့ခြင်းသည်သုညသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်, သို့ဖြစ်၍ သံချောင်းများကိုချည်နှောင်သောအစဉ်အလာနည်းလမ်းသည်ဤပြဿနာကိုထိရောက်စွာမဖြေရှင်းနိုင်ပါ. တိုက်တေနီယမ်နှင့်အလူမီနီယံစည်းနှောင်ထားသောသတ္တုများခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်, ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်၏အပူစွမ်းအင်သည်မပေါက်ကွဲနိုင်ဘဲပေါက်ကွဲနိုင်သည်, တင်းကျပ်သောလိုက်ဖက်သောနှောင်ကြိုးသည်စိတ်မချရပါ, plasma ဖြန်းထားသောတိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ်မှတ်၏အရည်အသွေးမှာညံ့ဖျင်းသည်။.
နာရီ၌အလှဆင်ထားသောအပေါ်ယံရွှေရောင်, လက်ဝတ်ရတနာ, နှင့်မျက်မှန်လုပ်ငန်းများ. မကြာသေးမီက, လိုအပ်ချက်များစွာသည်ကာဗွန်မပါ ၀ င်ဘဲမျက်နှာကိုနှင်းဆီရွှေရောင်နှင့်ပိုနီးစပ်စေသည်, TiCN သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီတော့ပါ. TiAlN သည်အပြည့်စုံဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်. တန်ဖိုးနည်းလက်ပတ်နာရီလက်ဝတ်ရတနာများသည်ရုပ်ရှင်အထူနှင့်အရောင်တောက်တောက်အတွက်လိုအပ်ချက်များမရှိပါ. ၎င်းတို့အများစုသည် TiAlN ကိုငွေသွင်းရန် arc တိုက်တေနီယမ်အလူမီနီယံပစ်မှတ်များကိုသုံးသည်. အဆင့်မြင့်အမှတ်တံဆိပ်နာရီများသည်အထူ ၁ မီလီမီတာနှင့်တောက်ပရန်လိုအပ်သည်. မချနိုင်ပါ။ arc သည်သေးငယ်သောအစက်များကြောင့်ထိခိုက်ပြီးချောမွေ့ပြီးထူသော film တွင်အားသာချက်မရှိပါအိုကယ်လီပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမှာ TiAIN ကိုလှည့်ရန်ပြွန်ပစ်မှတ်တစ်ခုနှင့် TiAIN သွင်းခြင်းဖြစ်သည်, အရောင်သည် rose gold နှင့်ပိုနီးစပ်သည်သာမက, ဒါပေမယ့်အထူတွေတက်လာပြီးတဲ့အခါအရောင်တောက်တောက်ကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။.
နောက်တစ်ခု: လှည့်ပတ်နေသော Sputtering ပစ်မှတ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။